သမ္မာကျမ်းစာ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
စာအုပ်များ၊ စာများနှင့် apocrypha
သမ္မာကျမ်းစာသည်ဂရိမှဆင်းသက်လာပြီးစာအုပ်များ (biblia) ကိုဆိုလိုသည်။ “ စာအုပ်များ” ကိုဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းသို့ခွဲခြားထားသည်။ ဧဝံဂေလိထုတ်ဝေမှုတွင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ရေးသားမှု ၃၉ ခုနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ၂၇ ပုဒ်အပြင် Apocrypha ဟုခေါ်သောဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏နှောင်းပိုင်းအရေးအသား ၁၁ ခုပါ ၀ င်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစာအုပ်များသည်ဇာတ်ကောင်စရိုက်အတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ၎င်းတို့သည်နယ်ပယ်အကျယ်အ ၀ န်းနှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ပုံစံအလှအပကိုကိုယ်စားပြုမှုတို့တွင်ကွဲပြားသည်။ အချို့ကသမိုင်းစာအုပ်များအဖြစ်၊ အချို့ကိုဖတ်စာအုပ်များအဖြစ်ကဗျာဆန်ဆန်နှင့်ပရောဖက်ပြုရေးသားခြင်းအဖြစ်ဥပဒေသင်္ကေတအဖြစ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
သေဆုံး ဥပဒေစာအုပ်များ မောရှေ၏စာအုပ်ငါးအုပ်ကိုစုပြီးbeginသရေလလူမျိုး၏ဇာတ်လမ်းကိုအီဂျစ်ပြည်တွင်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ခြင်းသို့ပြောပြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏အခြားစာအုပ်များသည်ခါနာန်ပြည်၌itesသရေလလူမျိုးများကိုအောင်နိုင်ခြင်း၊ theသရေလနိုင်ငံနှင့်ယုဒနိုင်ငံတို့၊ itesသရေလလူမျိုးများကိုပြည်နှင်ခံရခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဗာဗုလုန်၌ပြည်နှင်ခံခြင်းမှပြန်လာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သီချင်းများ၊ သီချင်းစာသားနှင့်သုတ္တံများကို OT နှင့်ပရောဖက်များ၏စာအုပ်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။
သေဆုံး သမိုင်းစာအုပ်များ ကတိထားရာပြည်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှနှင်ထုတ်ခြင်းမှဗာဗုလုန်ပြည်နှင်ထုတ်ခံရသူများထံပြန်လာခြင်းမှhistoryသရေလသမိုင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အပ်နှံပါ။
သေဆုံး ဖတ်စာအုပ်များနှင့်ကဗျာဆန်သောစာအုပ်များ စာတို၊ စကားပုံများနှင့်ကဗျာဆန်ဆန်အရည်အသွေးတို့၌ချရေးထားသောဉာဏ်ပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံတို့ကိုတင်ပြပါ။
ထဲမှာ ပရောဖက်များ၏စာအုပ်များ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဖြစ်စဉ်များအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ပရောဖက်များသည်ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုစေပြီးလူတို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေပြုမူပုံနှင့်နေထိုင်ပုံတို့ကိုသတိပေးသည်။ ရူပါရုံများနှင့်ဘုရားသခင့်လှုံ့ဆော်မှုများမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့သောဤသတင်းစကားများကိုပရောဖက်များကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သူတို့၏တပည့်များကရေးသားခဲ့ပြီးနောင်လာနောက်သားများအတွက်မှတ်တမ်းတင်သည်။
1. မောရှေကျမ်း (ကမ္ဘာဦးကျမ်း)
2. မောရှေကျမ်း (ထွက်မြောက်ရာ)
3. မောရှေကျမ်း (ဝတ်ပြုရာကျမ်း)
4. မောရှေကျမ်း (နံပါတ်များ)
5. မောရှေကျမ်း (တရားဟောရာ)
Das 1. ရှမွေလကျမ်း
Das 2. ရှမွေလကျမ်း
Das 1. ရှင်ဘုရင်ကျမ်း
Das 2. ရှင်ဘုရင်ကျမ်း
ရာဇဝင်ချုပ်စာအုပ်များ (1. နှင့် 2. အချိန်ဇယား)
သေဆုံး သမိုင်းစာအုပ်များ ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးစောင်နှင့်တမန်တော်များ၏တမန်တော်များကယေရှုခရစ်၊ သူ၏ဓမ္မအမှု၊ သူသေဆုံးခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောကြသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုစာအုပ်သည်ရောမအင်ပါယာ၌ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ပထမခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
သေဆုံး အကျဉ်းချုပ် တမန်တော်အမျိုးမျိုး၏ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းများသို့စာရေးခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ အကြီးဆုံးစုဆောင်းမှုမှာတမန်တော်ပေါလု၏စာ ၁၃ စောင်ဖြစ်သည်။
ထဲမှာ ဂျိုဟန်၏ဗျာဒိတ်တော် ၎င်းသည် Apocalypse၊ ကောင်းကင်ဘုံသစ်နှင့်မြေကြီးသစ်မျှော်လင့်ချက်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုပရောဖက်ပြုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
der 1. နှင့် 2. ပေါလုမှ ကောရိန္သုမြို့သို့ စာတိုပေးပို့သည်။
der 1. ပေါလုထံမှ သက်သာလောနိတ်မြို့သားများထံ ပေးစာ
der 2. ပေါလုထံမှ သက်သာလောနိတ်မြို့သားများထံ ပေးစာ
der 1. နှင့် 2. ပေါလုမှတိမောသေနှင့်တိတုထံစာတို (သင်းအုပ်ဆရာစာများ)
der 1. ပေတရုထံမှစာ
der 2. ပေတရုထံမှစာ
der 1. Johannes ထံမှစာ
der 2. နှင့် 3. Johannes ထံမှစာ
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏နှောင်းပိုင်းအရေးအသားများ / apocrypha
ကက်သလစ်နှင့်ပရိုတက်စတင့်ကျမ်းစာထုတ်ဝေမှုများသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ကွဲပြားသည်။ ကတ်သလစ်ဗားရှင်းတွင်နောက်ထပ်စာအုပ်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည်။
1. နှင့် 2. Maccabees စာအုပ်
ရှေးအသင်းတော်သည်ဂရိစာစောင်ကို Septuagint ဟုခေါ်သောအခြေခံအဖြစ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဂျေရုဆလင်မှရိုးရာဟေဗြဲစာစောင်များထက်စာအုပ်များစွာပါ ၀ င်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မာတင်လူသာသည်သူ၏ဘာသာပြန်ဆိုမှုအတွက်ဟေဗြဲစာစောင်ကိုသုံးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်စက်ပ်တွားဂျင့်ကျမ်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောစာအုပ်များပါ ၀ င်သည်။ သူကဘာသာပြန်ကျမ်းကို Apocrypha (စာသားအတိုင်းဝှက်ထားသော၊ လျှို့ဝှက်) ဟုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်: ဂျာမန်သမ္မာကျမ်းစာအသင်း http://www.die-bibel.de